Jamaica Tourism Gurukota Bartlett mushandirapamwe mutsva neMutungamiri Clinton nezve Tourism Resilience
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Jamaica Tourism Gurukota Bartlett mushandirapamwe mutsva neMutungamiri Clinton nezve Tourism Resilience
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Investments • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • chengetedzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • US Virgin Islands Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
Pamwe chete neMutungamiri uye Munyori Clinton, Gurukota rezvekushanya kuJamaica, Hon. Edmund Bartlett ataura nhasi inoenderera 4th musangano weClinton Global Initiative (CGI) Action Network paPost-Njodzi Kudzorera kuYunivhesiti yeVirgin Islands, St. Thomas, USVI achizivisa iyo Global Tourism Resilience uye Crisis Management Center.
Chinyorwa chehurukuro yake yekutaura:
Ini ndichatanga iyi hurukuro yekutaura ndichiti Kana tikakwanisa kushandisa izwi rimwe kutsanangura zvirinani indasitiri yezvekushanya yepasirese iro izwi rimwe chete "rinokwanisa". Chikamu ichi chakatarisana nenjodzi dzakasiyana siyana asi chakagara chakaratidza kugona kugona kupora nekukwira kuenda kumatunhu akakwirira. Kunyangwe zvakadaro, iyo yepasirese chikamu chekushanyirwa ikozvino chakatarisana nedanho risati ramboitika rekusava nechokwadi uye kusagadzikana izvo vagadziri vemitemo vanofanirwa kupindura nenzira ine hukasha, isingachinji. Tinofanirwa kuchengetedza musika wekushanya, kunyanya vatambi vedu vemuno, avo vakabatsira kuunza nyika kumahombekombe edu. Vanoverengeka vemuno-vanoshanda uye varidzi vevapi vanopa vakawedzera kukosha kwakanyanya kuhupfumi hweCaribbean. Imwe kambani, kunyanya, Sandals, yakabatsira kuisa maCaribbean pamepu.
Kukurumidzira kuri kupihwa mukana wekusimudzira kusimba kwenzvimbo dzekushanya dzepasirese kwakanangana nekusimbisa kwekutyisidzira kwetsika kune kushanya kwepasirese senjodzi dzinongoitika dzega dzakabatana nekushanduka kwemamiriro ekunze uye kudziya kwepasirese uye kubuda kwekutyisidzira kwesimba senge denda, hugandanga uye cybercrimes dzakabatana iyo inoshanduka hunhu hwekufamba kwepasirese, kudyidzana kwevanhu, kushambadzira kwekutengeserana uye zvematongerwo enyika.
Segurukota rekushanyirwa kubva kune imwe yenzvimbo dzinowirwa nenjodzi pasi rose, ndinoshinga kutaura kuti, ini ndinozvionera ndoga kukosha kwekuvaka kushinga mubato rezvekushanya. Hakusi chete kuti iyo Caribbean ndiyo inonyanya kusangana nedambudziko repasirese nekuda kwekuti zviwi zvakawanda zviri mukati meAtlantic dutu bhanhire panogadzirwa maseru emadutu uye nharaunda inogara pamitsara mitatu yekukanganisa kudengenyeka kwenyika, ndiyo zvakare yakanyanya nzvimbo yekushanya-inoenderana nenyika.
Idzi data razvino kwazvo rehupfumi rinoratidza kuti kurarama kweumwe wevane vagari vemuCaribbean kwakabatana nekubvakacha nepo kufamba uye kushanya kuchipa ku15.2% yeGDP yenharaunda zvese uye pamusoro pe25% yeGDP yeinopfuura hafu yenyika. Muchiitiko cheBritish Virgin Islands, kushanya kunopa ku98.5% yeGDP. Aya manhamba anoratidza zvakajeka mupiro wakakura wezvehupfumi weiyi chikamu kuCaribbean nevanhu vayo. Ivo zvakare vanosimbisa kukosha kwekuvandudza nzira dzekudzora dzinogona kuitika njodzi dzinogona kudzikamisa mabasa ezvekushanya mudunhu uye zvichikonzera kudzikira kwenguva yakareba mukukura nekusimudzira.
Kunyanya kukosha, gwaro richangoburwa rakaratidza kuti dunhu reCaribbean rinogona kurasikirwa ne22 muzana yeGDP na2100 kana iko kuitika kwekushanduka kwemamiriro ekunze kusingadzosere nedzimwe nyika dzakatarisira kutambura kurasikirwa kweGDP pakati pe75 ne100 muzana. Chirevo chakatsanangura kukanganisika kwenguva refu kweshanduko yemamiriro ekunze pahupfumi hwedunhu sekurasikirwa nemari dzekushanya. Sezvo vazhinji vedu tinoziva dunhu rakatarisana nenjodzi dzakanyanya dzechisikigo munguva dzichangopfuura. Iyo mwaka wedutu yakakonzera kurasikirwa kunofungidzirwa muna 2017 kwevashanyi 826,100 kuCaribbean, zvichienzaniswa nezvakafanotaurwa nedutu remhepo. Vashanyi ava vangadai vakagadzira US $ 741 mamirioni uye vakatsigira 11,005 mabasa. Tsvagiridzo inoratidza kuti kudzoka kumatanho apfuura kunogona kutora kusvika kumakore mana mudunhu iri richarasikirwa nemadhora US $ 3 bhiriyoni pane ino nguva yakatarwa.
Kunze kwekutyisidzira kuri pachena kwekushanduka kwemamiriro ekunze, vanobata nezvevashanyi havagone kuramba vasina hanya nezvimwe zvinonetsa zviri kukurumidza kubuda mukati mehukama hwepasi rose. Tora semuenzaniso, kutyisidzira kwehugandanga. Huchenjeri hwakajairika ndewekuti nyika zhinji dzisiri dzekumadokero dzaiwanzoiswa inshuwarisi. Nekudaro kurwiswa kwazvino kwekutyisa munzvimbo dzevashanyi senge Bali muIndonesia neBohol muPhilippines vakatsvaga kuzvidza fungidziro iyi.
Uyezve kune rimwe dambudziko rekudzivirira uye rine hosha uye nhenda munzvimbo dzevashanyi. Njodzi dzezvirwere uye denda chave chiri chiitiko chenguva dzose nekuda kwechimiro chekufamba kwenyika nekushanya kunoenderana nekubatana kwepedyo nekudyidzana pakati pemamirioni avanhu vanobva kumativi ese epasi zuva nezuva. Iyi njodzi yakasimudzira mumakore achangopfuura.
Nyika yanhasi haibatanidzwe nevhoriyamu yazvino, kumhanya, uye kusvika kwekufamba kusati kwamboitika. Anenge angangoita mabhiriyoni mana nzendo dzakatorwa nendege gore rapfuura chete. Chirevo cheWorldbank cha4 chakaratidza kuti denda rinogara kwegore rinogona kukonzeresa kudonha kwehupfumi kunokonzerwa nekuedza kudzivirira hutachiona sekuderedza kufamba kwemhepo, kudzivirira kuenda kunzvimbo dzine hutachiona, uye kudzikisira kushandiswa kwemasevhisi akadai sekudyira muresitorendi, kushanya, kutakura vanhu , uye zvisina kukosha kutengesa zvitoro.
Chekupedzisira, iko kuitika kwema digitalization zvinoreva kuti isu izvozvi tinofanira kufunga kwete kwete chete kutyisidzira zvinooneka asiwo kukura kuri kutyisidzira kusingaonekwe kunoenderana nemagetsi mabasa. Zvizhinji zvekutengeserana zvine chekuita nekushanya zvino zvaitika zvemagetsi kubva pakutsvagurudzwa kwekuenda kunzvimbo dzekuchengetera kuenda kunzvimbo dzekuchengetera kumubato wemuimba kubhadhara kubhawa kunotenga. Kuchengetedzwa kwekuenda hakuchisiri nyaya yekudzivirira vashanyi vepasirese uye hupenyu hwenzvimbo kubva panjodzi dzepanyama asi izvozvi zvakare zvinoreva kudzivirira vanhu kubva kutyisidziro dzekyber dzakadai sekubiwa kwechitupa, kubiridzira maakaundi ega uye kutengeserana kwekunyepedzera.
Isu takaona uko magandanga epamhepo e-cyber akatokonzeresa kukanganisa-kwese-kwese kune akakosha masevhisi mune dzimwe nyika huru munguva pfupi yadarika. Icho chiri, zvisinei, chokwadi chinosuruvarisa kuti nzvimbo zhinji dzevashanyi parizvino hadzina chero hurongwa hwekubata nezve cyber-kurwiswa.
Sezvo isu tichitsvaga kuvaka kwedu kushinga kupokana neakanyanya kutyisidzira kwekushanyirwa kwepasirese kwakaratidzwa muhurukuro yangu pamwe nevamwe vasina kutumidzwa zita, chinhu chakakosha chegadziriro yekusimbisa inoshanda kugona kutarisira zviitiko zvine njodzi. Izvi zvinoshandura kutarisisa kubva pakupindura kuvhiringidzo kuenda kuzvidzivirira pakutanga. Kuvaka kushingirira kunoda nzira yakarongeka inoenderana nekusimbisa kubatana munzvimbo dzenyika, dunhu pamwe nedzimwe nyika pakati pevamiriri vemitemo yekushanya, vagadziri vemitemo, mabhizinesi ezvekushanya, maNGO, vashandi vekushanya, masangano edzidzo uye ekudzidzisa uye huwandu hwevanhu kuti vasimbise kugona kwesangano kutarisira, kuronga, kuongorora uye kuongorora zviito uye zvirongwa kudzikisa njodzi zvinhu.
Izvo zvinodiwa zviwanikwa zvinofanirwa kupihwa kutsvagurudza, kudzidziswa, hunyanzvi, kuongorora, kugovana ruzivo, kuenzanisa uye zvimwe zvekuvaka kugona. Zvakakosha, kusimudzira kwekushanya hakugone kuve kwakakanganisa nharaunda sezvo iri pekupedzisira nharaunda inozochengetedza chigadzirwa chine hutano chekushanya, kunyanya kunzvimbo dzinoenda kuzvitsuwa. Kuedza kurwisa shanduko yemamiriro ekunze kunofanirwa kuve kwakadzika midzi mumatanho ezvekushanya kubva pakurongwa kwemitemo yekuvaka kusvika pakupa mvumo dzekuvaka kumutemo wezvemamiriro ekunze evanopa sevhisi kuvaka chibvumirano chevose vane chekuita nezvekukosha kwekutora tekinoroji yakasvibira chikamu.
Mukupindura kudana kwekuvaka kushinga kwekushanyirwa muCaribbean, ndinodada kuti nzvimbo yekutanga yekusimbisa nzvimbo inonzi 'The Global Tourism Resilience uye Crisis Management Center' yakavambwa paUniversity yeWest Indies, Mona Campus Jamaica. Iyo nzvimbo, inova yekutanga yerudzi rwayo, ichabatsira nekugadzirira, manejimendi, uye kugadzirisa kubva mukukanganiswa uye / kana matambudziko anokanganisa kushanya uye kutyisidzira hupfumi-zvinoenderana nehupfumi nehupenyu.
Iyo Center inotarisana nezvakakosha zvina zvinounzwa panguva ino. Imwe ndeye kugadzwa kwejenali redzidzo pamusoro pekusimba uye kukanganisa kwepasirese. Iyo edhisheni bhodhi yakagadzwa uye inotungamirwa naPurofesa Lee Miles weBournemouth University nerubatsiro rweGeorge Washington University. Zvimwe zvinotakurirwa zvinosanganisira kunyorwa kwepurani yekusimbisa; kugadzirwa kwekusimbisa barometer; uye kuumbwa kweChikoro cheChikoro chekusimba uye hunyanzvi. Izvi zvinoenderana nemvumo yeCentre yekugadzira, kugadzira uye kugadzira matekitchen, nhungamiro uye marongero ekutungamira maitiro ekudzoreredza njodzi yapera.
Iyo Center ichave nevashandi vanozivikanwa pasi rese nehunyanzvi munzvimbo dzekutarisira mamiriro ekunze, manejimendi manejimendi, manejimendi manejimendi manejimendi, manejimendi dambudziko rekushanya, manejimendi manejimendi, kushambadzira kushambadzira uye kushambadzira pamwe nekutarisa uye kuongorora.
Kunze kwekugadzwa kweResilience Center iyo inopa sisitimu yakanaka yekuvaka kushinga kwekushanya ndakazivawo kuti kutsiga kunofanirwa kuve kwakabatana nekusimudzira kukwikwidza kwekuenda. Kuvandudza kukwikwidza kwekuenda kunoda kuti vagadziri vemitemo yekushanya vaone uye vatarise dzimwe misika yevashanyi.
Nzvimbo diki dzevashanyi, kunyanya, hadzichagone kuvimba nemashopu mashoma emari kunyanya kuNorth America neEurope yemari yekushanya. Iyo haichisiri nzira inoshanda yekuchengetedza chigadzirwa chinoshanda chekushanya. Izvi zvinodaro nekuti nzvimbo nyowani dzemakwikwi dziri kubuda idzo dziri kudzikisa dzimwe nzvimbo dzevashanyi vechinyakare uyezve nekuti kutsamira zvakanyanya pamisika yechinyakare kunofumura nzvimbo dzekuenda kunzvimbo dzakanyanya yekushupika kune zviitiko zvekunze kwekunze. Kuti urambe uchikwikwidza uye uchitsungirira zvinoitika zvinokuvadza mumisika yechinyakare, nzvimbo dzaunofanirwa kuenda dzinofanira kukwikwidza zvikamu zvitsva kana misika yeniche kukwezva vafambi vanobva kumatunhu asiri echinyakare.
Uku kwaive kufunga kwekufunga kwakatitungamira kuti titange mashanu maNetwork muJamaica- gastronomy, varaidzo nemitambo, hutano uye hutano, kushambadzira uye ruzivo- sedanho rekushandisa masimba edu akavakirwa mukuwedzera kukwezva kwepasi rose kwenzvimbo yedu yekushanya apo kukurudzira mikana yakawanda yezvemari.
Mukuvhara, musangano uyu uchaita kuti kuchinjaniswa kwemazano ane musoro uye kufunga nezvekusimba uye kugadzirisa matambudziko. Aya mazano anobatsira vese vanogadzira mutemo nevabatanidzi varipo kuti vavake pane marongero aripo pamwe nekutarisa matsva / chiono. Pakupedzisira chibvumirano chinofanirwa kusvitswa pamusoro pechisimba chepasi rose / chirongwa chinogona kutorwa nenzvimbo dzese dzevashanyi pasirese.